Yenziwe ngesikhumba sokwenyani segusha, isikhumba segusha esenziwe ngobuso sishushu kwaye siyaphefumla. Uboya begusha buthambile kodwa bomelele. Yenziwe ngobunono kwaye yenziwa ngobuchule, ilungele imisebenzi yangaphandle ebusika ● Inombolo yenqaku: EF-001 ● I-100% yeegusha yokucheba kunye ne-suede ● Uboya bude: 1.6cm ● Umbala: mnyama, chestnut.coffe, grey neminye imibala ● Ukufudumeza nokuphindisa ukufuma ● Uyilo lwefashoni kunye nokulingana okukhulu, ubungakanani Babo
Yenziwe ngeyona suede yokwenyani yodidi kunye nokugcwala okugcweleyo kweegusha. Uboya begusha buthambile kodwa bomelele. Yenziwe ngobunono kwaye yenziwa ngobugcisa, ilungele imisebenzi yangaphandle ebusika ● Inqaku elingunombolo: EF-002 ● Faka iinkcukacha ezibini ze-buckles ● Ngokwenene i-suede yangaphandle, i-Luxury lining sheling sheling ● Uboya obude: 1.2cm ● Umbala: omnyama, i-chestnut.coffe, i-grey pink kunye neminye imibala ● Uyilo lwefashoni kunye nokulingana okukhulu, ubukhulu bayo
Yenziwe ngokucheba okwenyani, isikhumba se-suede zombini shushu kwaye siyaphefumla. uboya bokucheba buthambile kodwa bomelele. Yenziwe ngobunono kwaye yenziwa ngobugcisa, ilungele imisebenzi yangaphandle ebusika ● Inombolo yenqaku: EF-008 ● Isikhumba sokwenene soboya kunye noboya bokucheba iigusha ● Uboya bude: 1.2cm ● Umbala: mnyama, chestnut.coffe neminye imibala ● Ukufudumeza nokubuyisa ukufuma ● Uyilo lwefashoni kunye nokulingana okukhulu, ubungakanani Babo
Eyilwe ngesikhumba segusha ngokupheleleyo, eshushu kwaye ephefumlayo. Uboya begusha buthambile kodwa bomelele. Eyilwe ngobuchule kwaye yenziwa ngobungcibi, ilungele imisebenzi yangaphandle ebusika ● Inqaku lenombolo: EF-007 ● elenziwe ngofele lwegusha ngokupheleleyo ● Uboya obude: 1.2cm ● Umbala: mnyama, chestnut.coffe neminye imibala ● Uyilo lwefashoni kunye nokulingana okukhulu, ubungakanani Babo
Yenziwe ngebanga le-suede yokwenyani engaphandle, kunye nobunewunewu begusha bokucheba uboya ulusu. Uboya begusha buthambile kodwa bomelele. Yenziwe ngobunono kwaye yenziwa ngobungcibi, ilungele imisebenzi yangaphandle ebusika ● Inqaku akukho: EF-006 ● I-suede eyi-suede yangaphandle ● Iigusha ezityebileyo zokucheba uboya ● Uboya bude: 1.6cm ● Umbala: mnyama, chestnut.coffe, ngwevu neminye imibala ● Uyilo lwefashoni kunye nokulingana okukhulu, ubungakanani Babo
Isitayile sokwenene sokucheba uboya bendlebe ngombala odibeneyo
Yenziwe ngoboya obutofotofo bokucheba kunye nokunitha koboya. Kushushu kwaye kuyaphefumla. Uboya begusha buthambile kodwa bomelele. Yenziwe ngobunono kwaye yenziwa ngobungcibi, ilungele imisebenzi yangaphandle ebusika ● Inqaku lenombolo: EF-003 ● Ukunitha uboya ngaphandle ● Ukunxitywa kwegusha ukucheba uboya ● Uboya bude: 1.6cm ● Umbala: mnyama, chestnut.grey neminye imibala ● Uyilo lwefashoni kunye kufanelekile kakhulu, ubukhulu bayo
Yenziwe ngeyona suede yokwenyani yodidi kunye nokugcwala okugcweleyo kweegusha. Uboya begusha buthambile kodwa bomelele. Yenziwe ngobunono kwaye yenziwa ngobugcisa, ilungele imisebenzi yangaphandle ebusika ● Inqaku akukho: EF-003 ● Yenza iinkcukacha ngee-sequins ● I-suede yokwenene yangaphandle, ulwelo lweegusha ezihonjisiweyo ● Uboya obude: 1.6cm ● Umbala: mnyama, chestnut.coffe, grey pinki kunye eminye imibala ● Uyilo lwefashoni kunye nokulingana okukhulu, ubukhulu bayo
Uyilo olulula. Akukho zinkcukacha, le Hat yenziwa kwinqanaba lokuqala lesikhumba semvu esiphindwe kabini, uboya obungqindilili obuchetyiweyo ngaphakathi kwisikhunta esimile entlokweni yakho sivelisa ubushushu bendalo. Ukubonisana nomdaka ongaqhelekanga, ulunge ngakumbi kunxibo okanye izihlandlo ezingaqhelekanga. ● Inqaku lenqaku: HW-023C ● 100% itakane lokwenene ● Umbala: MNYAMA. ● Ukucoca ngokubanzi ● Ukuyilwa ngobunono kunye nokulingana okukhulu, ukutshaja kobungakanani
Uyilo lwefashoni kunye nokulunga okukhulu. Lo mnqwazi wenziwe ngesikhumba semvu esinamacala amabini, Icala elingaphandle linomphetho oqinileyo wesikhumba se-napa kwaye icala langaphakathi lithambile. Igcina intloko yakho ifudumele kwaye icocekile ibandakanya iindlebe, ibunzi nentamo ngale nto intle yesikhumba sasebusika kunye nomnqwazi woboya, Iiflegi ezifudumeleyo zeendlebe zibopha phantsi kwesilevu, ngaphezulu kwesithsaba, okanye ngasemva, umnqwazi ogqwesileyo kwimisebenzi yangaphandle, enje ukuskiya, ukuhamba ngebhola ekhatywayo, ibhola ekhatywayo, ukuhamba intaba, imidlalo yeemoto, ukuzingela neminye imidlalo yasebusika ....
Uyilo olulula. Akukho zinkcukacha, lo mnqwazi wenziwe ngesikhumba segusha esinamacala amabini, Icala elingaphandle linomphetho oqinileyo wesikhumba se-napa kwaye icala langaphakathi lithambile. Ubungqingqwa obuchetyiweyo boboya ngaphakathi kumngundo obume kwentloko yakho obudala ubushushu bendalo. Iimpompo ezifudumeleyo zeendlebe zinokuqengqeleka phantsi xa kubanda kakhulu. ● Inqaku akukho: HW-020M ● 100% itakane lokwenene ● Umbala: Camel.brown kunye neminye imibala ● Ucocekile ngokubanzi ● Yenziwe ngobunono kwaye ilungile, ...
Yenziwe nge-napa merino yesikhumba segusha, eshushu kwaye ephefumlayo, uboya begusha buthambile kodwa bomelele. Iintsinga zayo zitsalela ngaphakathi, zisebenza njengomlawuli wendalo ngaphakathi, Esi sitayile sinesithsaba esimileyo sedome kunye nebhanti ebanzi yoboya. ilungele amaxesha okunxiba okanye okungaqhelekanga ebusika ● Inombolo yenqaku: HW-016N ● napa Sheepskin ● Yifudumele kwaye igxothe ukufuma
ubunewunewu kunye neklasikhi, Yenziwe nge-napa merino yesikhumba segusha, efudumeleyo kunye ne-beathable, ithambile kodwa yomelele, Esi sitayile sinesithsaba esinye kunye nebhanti yoboya ebanzi eneenkcukacha zamaqhosha. Zonke iiplanga zivaliwe ukucoceka, ukugqitywa kwesitayela, zilungele ixesha elinxibayo okanye eliqhelekileyo. ● Inqaku akukho: HW-015N ● 100% real napa Sheepskin ● Colour: black.brown kunye neminye imibala ● Wide clean ● Eyilelwe ngobunono kwaye ilungile, Intlawulo yobukhulu